Iji nweta ọkwa nke inweta nrọ nke ndị ọrụ anyị! Iwulite ndi oru obi uto, obi-uto ma nwekwuo onu! Iji nweta otu uru nke atụmanya anyị, ndị na-ebubata ya, ọha mmadụ na anyị onwe anyị maka ire ere 32oz Big Soup Cup Packaging PLA Bowl Supplier Large PLA Salad Bowl Disposable Chinese PLA Soup Bowl with Lid, Nabata ụwa niile ndị na-azụ ahịa iji kpọtụrụ anyị maka ụlọ ọrụ na ogologo oge imekọ ihe ọnụ. Anyị na-aga ịbụ gị pụrụ ịdabere na onye na soplaya.
China na-ere China 32oz PLA ofe Bowl, PLA salad Bowl, A na-ebupụ ihe anyị n'ụwa niile. Ndị ahịa anyị nwere afọ ojuju na njirimara anyị nwere ntụkwasị obi, ọrụ ndị ahịa na ahịa ahịa. Ebumnuche anyị bụ "ịnọgide na-erubere gị isi site na ịrara mbọ anyị na-enwe mgbe niile ka mma nke ngwaahịa na ihe ngwọta na ọrụ anyị iji hụ na afọ ojuju nke ndị ọrụ njedebe anyị, ndị ahịa, ndị ọrụ, ndị na-eweta ngwaahịa na obodo ụwa niile anyị na-akwado ".
Ọma na-agba ọsọ na ngwá, ọkachamara ahịa otu, na mma mgbe-sales ọrụ; Anyị bụkwa nnukwu ezinụlọ dị n'otu, onye ọ bụla na-arapara na uru ụlọ ọrụ "ịdị n'otu, nraranye, ndidi" maka ngwaahịa ndị China China PVC Granule Plastic Material with High Quality, Anyị ji obi ike na anyị ga-eweta ngwanrọ kachasị mma na resonable price tag , kediegwu mgbe-ahịa nkwado maka ndị ahịa. Anyị ga-azụlite ọdịnihu na-enwu gbaa.
Nke gara aga: Achịcha Ice Ice
Osote: Iko Efere